Warakii Ciyaaraha - BBC Somali
2 Febraayo 2016
Lacagaha naadiyada kubadda cagta ee Ingiriisku ay ku qarash gareeyeen iibsiga ciyaartoyda ayaa noqotay tii ugu badneyd shantii sano ee lasoo dhaafay. Naadiyada ayaa 1.045 bilyan oo Gini ku bixiyay iibsiga cayaartoyda sanadka 2015-2016.
Sanadkii 2014-2015 ayay naadiyadu ku qarash gareeyeen iibsiga cayaartoyda 965 Milyan oo Gini.
Labada naadi ee Stoke Iyo Everton ayaa qarash gareeyay 175 milyan.
Waana lacagtii ugu badneyd muddo shan sano ah.
Kooxda Stoke ayaa jabiyay rekoorkoodii hore waxeyna cayaaryahan Giannelli Imbula oo u dhashay dalka faransiiska kaga soo qaateen kooxda FC Porto lacag dhan 18.3 Milyan xilli uu suuqa xirmayay, halka kooxda Everton ay ciyaaryahan Oumari Niasse oo u dhashay Senegal kaga soo iibsatay Lokomotiv Moscow lacag dhan 13.5 Milyan.